चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी विश्लेषण - Aathikbazarnews.com चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी विश्लेषण -
summer programs for creative writing oxford creative writing summer course improve creative writing skills fast creative writing workshops dublin year4creative writing worksheets do your homework traduccion ingles creative writing online activities creative writing cover lesson do my homework online engineering thesis help scared person creative writing creative writing all about creative writing starter exercises write my phd thesis creative writing in urdu how to buyaresearch paper for college hate creative writing louisiana state university mfa creative writing creative writing image stimulus creative writing train station what do creative writing include self help in hard times thesis arizona state university mfa creative writing primary homework help co uk egypt mummies creative writing kamloops i do my homework yesterday creative writing in workplace app that helps you with homework help me come up withathesis statement writer of narrative essay
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी विश्लेषण
कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा मंगलवार ८ रुपैयाँले कमी आएको छ । शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रु. ७०७ मा झरेको हो । मंगलवार कम्पनीको रु. १४ करोड ३८ लाख १७ हजार बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ५१ करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले रु. ५२ करोड ५६ लाख नाफा कमाएको थियो । नाफामा कमी आएसँगै प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ ।
गत आवमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रु. १२ दशमलव २७ रहेकामा चालू आवमा रु. १० दशमलव ८३ मा झरेको हो । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रु. ८० करोड ३७ लाख १९ हजार विद्युत् बिक्रीबापत आम्दानी भएकामा चालू आवमा रु. ८० करोड ९२ लाख २५ हजार पुगेको हो ।
कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा डोजी बनेको छ । यस्तो मैनबत्तीले बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य अन्योलमा रहेको संकेत गर्छ । आरएसआई न्युट्रल जोन ५८ दशमलव ७७ बिन्दुमा छ ।
यसले शेयर खरिद बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन १९ दशमलव ४८ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा जोखिम मध्यम हुन्छ भने प्रतिफल पनि मध्यम हुने गर्दछ ।
मलहोत्राले दिए स्वास्थ्य विभागलाई ५० हजार मास्क